Ismaamulka Tigrey ee dalka Ethiopia oo ka biyo diiday go’aanka dowlada federalka ee joojinaya in la qabto doorashoyinka sanadkan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ismaamulka Tigrey ee dalka Ethiopia oo ka biyo diiday go’aanka dowlada federalka...
Ismaamulka Tigrey ee dalka Ethiopia oo ka biyo diiday go’aanka dowlada federalka ee joojinaya in la qabto doorashoyinka sanadkan.
Wararka ka imaanaya Ismaamulka Tigrey ee dalka Ethiopia ayaa sheegaya in maamulkaasi ay ku adkeysanaya inay qabtaan doorashada baarlamaanka ismaamulka Tigrey oo dhacaysa arbacada soo socota, iyagoo iska dhega tiraya go’aanka dowlada federalka ee joojinaya in la qabto doorashoyinka sanadkan.
sidoo kale Majiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dowlada federalka Ethiopia balse afhayeenka xukuumada Ethiopia ayaa sheegay in arrintan ay u taal baarlamaanka Ethiopia.
Previous articleMadaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka
Next articleAlshabaab oo 4 Nin toogatay magacyada 4 Nin
Xildhibaan ka hor Yinid war dhawaan ka soo yeerray Xildhibaan Xidig
Madaxweyne Muuse Biixi oo Qudbada Salaada Ciida ka Dib la hadlay...